Top 5 Siyaabaha Bedelka Music ka Mac in macruufka 7
> Resource > Mac > Top 5 Solutions si ay u gudbiyaan Music ka Mac in macruufka 7
Waxaa jira siyaabo fara badan in ay ka soo Mac a wareejiyo music qalab macruufka 7 ah. Waxaan halkan ku soo ururin doonaa, rajeynaya ay ka dhigi doonaa wax fudud in aad ku raaxaysan music. Waxaa ka mid ah 5 xal, qaar ka mid ah u ogolaadaan isticmaalayaasha inay ka Mac a wareejiyo music in macruufka 7 qalabka aan Lugood. Qaar ka mid ah ka samaysaa aad u sahlan dadka isticmaala si ay u wadaagaan music dhexeeya Mac ah iyo arrimo badan 7 qalabka. Read ku bartaan faahfaahinta.
Xalka 1. Copy Music ka Mac in macruufka 7 la Lugood ah
Solution Music 2. Transfer ka Mac in macruufka 7 la iCloud
Xalka 3. Helitaanka Music on Mac ah ay u sahasho Home Sharing
Xalka 4. Ku rid wax song ka Mac ah in macruufka 7 la TunesGo (Mac)
Xalka 5. Share Music dhexeeya a Mac iyo macruufka 7 Qalabka la WordPress
Sida ugu isticmaalay si weyn in aad nuqulka music ka Mac ah in qalab macruufka 7 la isticmaalayo Lugood ku Mac. Oo waa qalab ugu horeysay oo ay dad badan u isticmaalaan in ay ku riday music ka Mac in ay macruufka 7 qalabka. Si aad nuqul music ka Mac ah in qalab macruufka 7 ah, raac tallaabooyinka:
Connect ee macruufka 7 qalab la Mac via cable USB ah; Marka dhakhso ah soo booda, aad weydiinaya in ay aaminaan Lugood ama ma, fadlan guji Trust ee macruufka aad 7 qalab;
Burcad Lugood. Guji "View" ee ka jaray dooro Show galeeysid ;
On galeeysid ah, guji macruufka aad 7 qalab. Riix ah "Music" tab on sare ee daaqadda. Calaamadee "nidaameed Music" oo guji "nidaameed" on xaq hoose ee suuqa kala.
Fiiro gaar ah: Lugood kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan music ee ka mid ah qaabab ka Mac in macruufka aad 7 qalab: MP3, AAC, regelingen, M4A, AIFF, AIF, M4R / M4B.
Pro: si xor ah u nuqul ka music ka Mac ah in qalab macruufka ah;
Con, ma fududa in la isticmaalo;
Xalka 2. Transfer Music ka Mac in macruufka 7 la iCloud
iCloud on Mac iyo macruufka 7 qalabka kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto Lugood Store in macruufka aad soo iibsatay songs 7 qalab si toos ah. Marka aad soo iibsatay hees meel kasta oo ku saabsan qalab wax Mac ama macruufka, iCloud u soo bixi doonaa inuu macruufka aad 7 qalabka. Eeg tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo ka Mac a wareejiyo music in macruufka 7 qalab la iCloud:
Sahlo iCloud on Mac: On Mac, guji icon Apple oo ku saabsan bidix iyo dooro mid aad u sareysa rabtid System ... liiska hoos-hoos. Raadi iCloud iyo labo gool waxa ay guji. Daaqadda iCloud ah, geli ID Apple aad.
Daar iCloud ku qalab macruufka ah 7: Tubada Settings> iCloud iyo geli ID Apple aad. Markaas waa in aad ku sawirnaa Settings> Lugood & App Store u Jeediya doorasho Music ah.
Taasi waa! In mustaqbalka, mar kasta oo aad wax iibsigu hees ku Lugood Store on Mac, waxa lagala soo bixi doonaa in aad macruufka 7 qalab. Haddii aad qabtid qaar ka mid ah oo aan Lugood iibsaday heesaha oo u baahan in la dul dhigo macruufka 7 qalab via Mac, waa inaad qori Lugood Match at $24.99 sanadkiiba. Waxay ku urursan doonaa dhammaan gabayo iCloud.
Pro: Mac ka saar heesahaaga macruufka 7 qalabka wirelessly;
Con: kooban u iCloud oo ka shaqeeya oo keliya Lugood Store iibsaday songs,
Haddii aad Mac iyo macruufka 7 qalab la wadaago WiFi la mid ah, aad tahay qof ay awoodaan in ay la macruufka aad 7 qalabka wadaagaan music aad Mac ka kaaftoomi si xor ah. Read tallaabooyinka hoose si aad awood Home Sharing labada on your Mac iyo macruufka 7 qalabka.
Sahlo Home Sharing on Mac ah: Open Lugood iyo guji File> Sharing Home> Daar Home Shring . Ku qor ID Apple iyo guji shid Home Sharing . sahlo Home Sharing qalabka macruufka ah 7: Tubada Settings> Music. In ka -WADAAGIDA HOME (ee qaybta hoose) si ay u soo galaan ID isla Apple aad galay Mac on. Share Music on Mac la qalab macruufka ah 7: Tubada Settings> Music> Wadaago dooro Library la wadaago.
Pro: Waa mid aad u fudud in ay wadaagaan music dhexeeya Mac ah iyo dhowr macruufka 7 qalabka;
Con: Labada Mac iyo macruufka 7 qalabka waxaa looga baahan yahay in ay isticmaalaan WiFi isku mid ah;
Xalka 4. kasta oo song laga saaray Mac ah in macruufka 7 la TunesGo (Mac)
Haddii aad rabto in aad saaray heeso ka Mac ah in qalab kasta oo macruufka 7 aan loo kala soocin, desktop-ka Wondershare TunesGo (Mac) waa doorasho adiga kuu wanaagsan. Waxay leedahay ma looga baahan yahay oo shabag iyo music qaabab. Marka aad u rakibay on your Mac, aad wax song ka Mac awoodi karaa inuu wareejiyo si macruufka 7 qalabka aan syncing. Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo u leedahay in isku day ah!
Download version maxkamad free of Wondershare TunesGo (Mac). Qalab ee version Windows waa la heli karo iyo sidoo kale.
1.Collect macruufka aad 7 qalab la Mac iyo abuurtaan Wondershare TunesGo (Mac).
2. Riix Music iyo in ay suuqa kala, guji Add in music ka Mac geliyaan si ay macruufka aad 7 qalab si toos ah. Marka hees taas oo aan la taageeray by macruufka 7 qalab waxaa uploaded, qalab waxa loogu badalo doonaa macruufka 7 qalab qaab saaxiibtinimo.
Pro: waa A qalabka macruufka iyo dadka isticmaala Mac;
Con: Waxaa kici doona, anagana yar;
Ka sokow Apple iCloud, waxaa jira qalab kale oo daruur ku salaysan u saamaxaya in ay wadaagaan music dhexeeya a Mac iyo macruufka 7 qalabka. Tusaale ahaan, WordPress waa mid ka mid ah kuwa si fiican u yaqaan. Waa in aad soo dajiyo WordPress on your Mac iyo WordPress on macruufka aad 7 qalabka sida si fiican. Isticmaal account in iyaga la wadaajin. Marka aad geliyey gabay ee WordPress ku saabsan Mac oo u hagaagsan, markaas waxaad 7 qalabka sida fiican u arki kartaa in WordPress oo ku saabsan arrimo aad.
Pro: Free, Con: Waxa kale oo ay u baahan yihiin oo shabag ah oo deggan;
Watch Video in ay bartaan sida ay u gudbiyaan Music ka Mac in macruufka 7
5 Siyaabo loogula lagu kalsoon yahay inay Download Free Music for PC iyo Mac
MakeMKV u Mavericks, Beddelaan DVD in kasta Video